Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eri ihe na-anwụ anwụ & ndị na-ebubata ihe - China anwụ na-emepụta ihe nkedo
Aka uwe maka igwe nkedo anwụ anwụ
Aka aka bụ akụkụ bụ isi nke ọnọdụ ịgba ntụtụ nke igwe oyi akwa anwụ. Ọ bụ akụkụ a na-arụ ọrụ nke ejiri ọla pụrụ iche mee. Ọ chọrọ izute ihe achọrọ nke oke okpomọkụ, nrụgide dị elu na mmepụta ike dị elu. Ọ nwere ihe dị elu chọrọ maka ihe nrụpụta ya ma chọọ ọgwụgwọ okpomọkụ.
Usoro mmepụta chọrọ mmanu iji gboo ihe ndị a chọrọ ma mee ka ndụ ya dịkwuo ogologo. Ọ bụ ihe oriri na ọ dị mkpa ka dochie ya ozugbo enwere ike imebi ya, ka ọ ghara imetụta àgwà na arụmọrụ nke mmepụta.
Igwe ihe eji eme ihe nkedo zinc alloy die
E wezụga ikpo ọkụ ọkọlọtọ, anyị nwekwara ike ịnye ikpo ọkụ pụrụ iche dịka ihe ị chọrọ.
Ọgazị olu maka igwe ihe nkedo zinc alloy die
Standard ojiji maka 10T/25T/30T/40T/50T/90T/130T/160T/200T/280T/400T
Omenala ojiji maka 28T/38T/60T/88T/100T
E wezụga ọkọlọtọ ọgazị olu, anyị nwekwara ike na-enye pụrụ iche ọgazị olu dị ka gị chọrọ.
Isi ihe nkedo Iron Plunger/ Ntụnye Iron Plunger
Anyị nwere ihe karịrị 20 afọ nke nnyocha na ngwa na mmepụta nke plunger n'ọnụ, site na-agbakwụnye ọdịnaya nke ally ọcha na ductile ígwè. na imezi ihe owuwu aain iji mee ka ọ bụrụ mgbagha lattice kristal na dislocation mgbe ọgwụgwọ pụrụ iche gasịrị. Ya mere, a na-emeziwanye nguzogide okpomọkụ dị elu na nguzogide eyi n'etiti ọla. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị na-emepụta nkà mmụta sayensị na ezigbo nodular cast iron plunger tip nke ndụ ọrụ ya ruru ugboro 5000.
Isi Plunger jikọtara ọnụ
Isi Plungern Standard
Dayameta: 40mm / 50mm / 60mm / 70mm / 80mm / 90mm / 100mm / 110mm / 120mm / 130mm / 140mm / 150mm / 160mm / 170mm / 180mm / 190mm / 200m m
Onye isi Plunger omenala
Dayameta: 45mm / 55mm / 65mm / 75mm / 85mm / 95mm / 105mm / 115mm / 125mm / 135mm / 145mm / 155mm / 165mm / 175mm / 185mm / 195mm / 205mm
E wezụga ọkọlọtọ, anyị nwekwara ike ịnye ndị pụrụ iche plunger isi dị ka gị chọrọ.
Onye isi Nano Plunger
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Standard Plunger Hea
Nickel Plunger Isi
Standard Plunger Isi
1. High thermal conductive, oge nzaghachi ngwa ngwa, njikwa okpomọkụ ziri ezi.
2. Ọxịdashọn dị mma, mbuze na nguzogide ujo.
3. Ezigbo iguzogide nrụgide n'ibu.
4. Ọ dịghị mmetọ ka ígwè gbazee.
5. Ogologo ndụ ogologo oge, enwere ike itinye ya ngwa ngwa.
Nchekwa: Nchekwa ime ụlọ, ndụ shelf 3 afọ.
Nkwakọ ngwaahịa: 18Kg Agba Mbukota, 180Kg ígwè mbukota.
Ụdị: P-LB100, P-LB160.
Ndekọ anụ ahụ na kemịkalụ: enweghị njedebe na mmiri (mmiri soluble), mmiri ara ehi na-acha ọcha (droplet polarized light blue), enweghị ntụpọ ọkụ, uto aromatic, PH8.0-PH9.0, njupụta 0.96-0.97g/ cm3.